Aéroport Nosy-Be : Hahazaka fiaramanidina goavana -
AccueilRaharaham-pirenenaAéroport Nosy-Be : Hahazaka fiaramanidina goavana
31/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny sabotsy lasa teo no nidina nijery ifotony ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina tao Fascene Nosy-Be ny Filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina. Teo am-pahatongavana dia nihazo avy hatrany nijery ifotony ny tara hipetrahan’ny fiaramanidina ny tenany. Nanazava ny fandehan’ny asa sy ny pitsopitsony ara-teknina kosa ny teknisianina avy ao amin’ny CMBI, ary fantatra tamin’izany fa ny volana novambra ho avy izao dia ho vita ny fandrakofana sy ny fanamafisana ny tara. Araka izany dia nilaza mazava ny Filoha Hery Rajanaorimampianina fa ‘’tsy ela ny vokatra satria mila fampandrosoana ny vahoaka’’. Naharitra herintaona kosa ny famolavolana momban’ny tombana rehetra sy ny fampitana tsikelikely ny asa teo amin’ny ADEMA sy ny RAVINALA AIPORTS. Ankehitriny dia efa mizara ary efa mandray ny anjara fitantanana tandrify azy ny tsirairay. Ho an’ny ADEMA izao dia ny lafiny ara-teknika toy ny fitazonana ny fandrindrana ny fidinan’ny fiara- manidina no notazonin’izy ireo, izany hoe ny ‘’tour de control’’, ny fahazavan’ny tara fidinan’ny fiara-manidina amin’ny ‘’piste’’ary ny vonjy voina raha sanatria misy ny afo. Mandritra ny telo taona ny faharetan’ ny asa fanavaozana izay atao, ary tafiditra anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena amin’ ny hanomezana endrika sy fotodrafitrasa ny tanànan’i Nosy Be izao asa fanamboarana izao. Raha ny tetibidin’ny asa fanamboarana kosa dia mahatratra hatrany amin’ny 200 tapitrisa Euro a ny. Io vola io kosa raha ny fanazavana nomen’ny Filoham-pirenena dia tsy ho trosan’ny taranaka satria dia ny orinasa mitantana azy no manofa ny seranana. Raha ny fanazavana izay nomen’ny Filoha mikasika ny lafiny ara-teknika momban’ny tara izay hidinan’ny fiaramanidina hiantsona ao Nosy Be dia fiara- manidina goavana iray ihany no tsy zakany dia ny A 380.
Avo telo heny
Hisy tombony goavana ho an’ny tanànan’ i Nosy Be sy ny fizahantany iray manontolo ny fanamboarana izay tanterahina, satria dia hiroborobo ary hitombo avo telo heny ny mpizahatany ho tonga ao Nosy Be. Izany hoe ho tombony ara-toekarena ny fahavitan’izao fotodrafitrasa izao. Tanjona hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny hitondra endrika vaovao ho an’i Nosy Be ‘’varavaran’ i Madagasikara ny seranam-piaramanidina, ary mampiray antsika na Malagasy na vahiny ihany koa’’.Tsy izay ihany anefa fa tsapa tamin’ny kabary izay nataon’ny Filoham-pirenena ny fahavononana hampandroso satria dia efa niompana amin’ izany hatrany ny fitondram-panjakana “azo atao ny manatsara ny sarin’ny tanàna, ny firenena , ny nosy ary i Nosy Be dia hitondra tosika amin’ izany ny Filoham-pirenena Malagasy satria dia fitaratra ho an’ i Madagasikara raha i Nosy Be‘’.
Ny fampandrosoana lalina kosa izao no efa hifotorana ary taratr’izany izao asa mivangaina izao, satria dia nambaran’ ny Filoha malagasy fa ‘’vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina izao vokatra izao noho ny ezaka izay efa natao amin’ny asa vita porofo fa miasa ny fanjakana’’. Raha ny zavatra hita ankehitriny tokoa dia fotodrafitrasa amin’ny ho avy izao hita fa tanterahin’ ny fanjakana ankehitriny izao, ary manampy amin’ny fahavitan’izany ny fahatokisan’ ireo mpamatsy vola ‘’tsy ela ny vokatra, efa nampiseho isika fa afaka mandresy lahatra ireo mpamatsy vola, ary eo ihany koa ny fahaizana miara-miasa amin ny mpamatsy vola tsy miankina tahaka izao hita maso izao’’.
Raha ny fanazavana izay noentin ny Filoham pirenena ihany koa dia tsy io seranam-piaramanidina io irery akory no fotodrafitrasa efa natomboka fa maro samy hafa. Anisan’ ny laharam-pahamehana ihany koa ny fotodrafitrasa manaiky vahoaka. Isan’ny ohatra nomen’ ny Filoha mikasika ny zava-bita tao amin’ny faritra DIANA dia ny fampandehanana ny rano ao Ambilobe, Ambanja ary ny ao Anivorano. Tsy mijanona hatreo ihany koa ny asa izay hotanterahina, hoy hatrany ny filoham-pirenena Malagasy, fa mitohy, hitohy ary hihamafy. Marihina fa efa nisy asa goavana ihany koa izay notanterahin’ny ADEMA amin ny nahazoana ny seranana ilay antsoina hoe »certificat’’ ka nahafahan’ ny iraisam-pirenena nankatoa izany, vola mitentina 15 miliara Ariary kosa no nampiasaina tamin’izany.
Tsy tokony hitaintainana, na hiaina anaty tahotra ny vahoaka malagasy miatrika izao vanim-potoana hisian’ny valanaretina pesta izao, satria dia ampy tsara hiatrehana tanteraka izany ny tahirim-panafody eto amintsika. Ankoatra nyezaka maro efa nataon’ny fitondram-panjakana mantsy, ...Tohiny